सुताइ अनुसार थाहा पाउनुहाेस् तपाइकाे दाम्पत्य जिवन कस्ताे ? - Purbeli News
सुताइ अनुसार थाहा पाउनुहाेस् तपाइकाे दाम्पत्य जिवन कस्ताे ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख २१, २०७७ समय: ८:११:३९
बैवाहिक जिवन मानिसकालागि अत्यन्तै आवस्यकीय र शुखमयी क्षणको रूपमा मानीदै आएको छ । यसले परीवारीक सम्बन्ध बलीयो बनाउनका साथै जिवनमा नयाँ उर्जा उत्पन्न हून्छ र समाजमा बेग्लै महत्व राख्छ । बिवाह पश्चात प्रत्येक दम्पतिहरू आफ्नो बैवाहिक जिवन सधैकालागि बलीयो र सुमधुर बनाउन चाहन्छन् । बैज्ञानिक अनुसन्धान अनुसार कसको बेवाहिक सम्बन्ध कती बलियो छ भन्ने आधार र प्रमाणहरू प्रसस्तै देखाएका छन तर हालै गरिएको नयाँ खोज अनुसार सुताइको प्रकार अनुसार तपाइको बैवाहिक जिवन कस्तो र कती बलीयो छ भन्ने देखाइएको छ । आउनुस यि १० प्रकारका सुताइलाई आधार मानेर तपाइको बैवाहिक सम्बन्धबारे जान्ने कोशीश गर्नुहोस ।
१ चम्चा आकारको सुताइ
यस्लारई अर्को अर्थमा भन्नपर्दा ूअर्ध(भ्रूण, चाक विरुद्ध जननू,पनि भन्ने गरिन्छ यस्तो प्रकारको सुताइले तपाइको बैवाहिक जिवनलार्इ शारिरीक सन्तुस्ट प्रदान गर्नुकासाथै निकटता पनि प्रदान गर्छ । बैवाहिक बन्धनमा बाधिएका जोडिहरू तिन देखी ५ बर्ष सम्म यस प्रकारले सुत्ने गरेको अध्यनले देखाएको छ ।
२ सुहागरात पछिको सुताई
यस्ता प्रकारको सुताइले एक आपसमा प्रेम सम्बन्ध बलियो बनाउनुकासाथै यौन सम्बन्धपनि बलियो बनाउने काम गर्छ । यसले दुवैको सम्बन्धलार्इ गहिरार्इ सम्म पूर्याउन मदतपनि गर्छ । कारणबस अलगिएर सुत्नुपरे अधिकांसले यहि पोजिसनलाई अपनाउने गरेको अध्यनले देखाएको छ ।
३ एक्लाएक्लै सुताई
आफ्नो बैवाहिक जिवनलाई बलियो बनाउन र भविष्यकोबारे योजना बनाउन यस्तो प्रकारको सुताइले धेरै मदत पुर्याउने एक अध्यनले देखाएको छ । यस्ता सुताइ अधिक लामो समय भने नरहने अध्यनले देखाएको छ ।
४ अंगालोमा बेरीएको सुताई
यो एक प्रकारको आलिंगन सुताई मानिन्छ यस्ता प्रकारको सुताइले दुवैको बैवाहिक सम्बन्धलाई प्रागढ बनाउनका साथै घनिस्ठता बढाउन मदत पूर्याउछ ।
५ थकान महसुस सुताई
यो दाइने फर्केर कोल्टे पाराले सुत्ने एक शैली हो । धेरै दम्पतीहरू यस्तो प्रकारको सुताइबाट आफुहरूलाई शुरक्षित महसुस गर्ने गर्छन ।यस्तो सुताइले दुवेको भावनालाई नजिक ल्याउने काम गर्छ र भविष्यमा दाम्पत्य जिवन शुखमयले गुजार्न मदत पूर्याउछ ।
६ खुट्टा बोकाइने सुताई
अप्रत्यक्ष शारीरिक सम्पर्क स्थापित गर्न यस्तो सुताइले बैवाहिक जिवनमा धेरै मदत पूर्याउछ । तर कहिलेकाहि आपसी विवाद पछि आफ्नो जिवनसाथीलाई फकाउन यस्तो प्रकारको सुतार्इ प्रयोग हुने गरेको एक अध्यनले देखाएको छ । यो अधिक लामो समय नरहनेपनि एक अध्यनले देखाएको छ ।
७ साझेदार सुताई
यस्तो सुताइले दाम्पतिय जिवनमा यौन सम्बन्ध बलियो बनाउन मदत पुर्याउनुकासाथै दुवै बिचको असमझदारी हटाइ नया प्रेम सम्बन्ध कायम गर्छ । बैवाहिक जिवनमा यसतो प्रकारको सुताइको धेरै महत्व मानिदे आएको छ र अधिकांस जोडीले यहि प्रकारलाई अंगाल्दै आएको एक अध्यनले देखाएको छ ।
८ जेन सुताई –
यो एक प्रकारको अनौठो सुताई हो जसलाई फराकिलो महसुस गर्दै सुतिन्छ । यो दुवैबिच असमझदारी कायम पछि सुतिने प्रकारपनि मानिन्छ । आपसी मनमुटाव भएपछि यस्तो प्रकारको सुताइ प्रयोग हुने गरेको अध्यनले देखाएको छ । यो सुताइ अधिक लामो समय नरहनेपनि अध्यनले देखाएको छ ।
९ फराकीलो महसुसको सुताइ –
आपसी मनमुटाव दैनिक बढेर जानु र दाम्पत्य जिवनमा खटपट पैदा भएपछि अधिकांस जोडीले एक अर्कालार्इ नछुने तरिकाले सुत्ने बिधी फराकिलो महसुस सहितको सुताइ मानिन्छ । यो प्राय अधबैसको उमेरमा लागु हुने अध्यनले देखाएको छ । यस्तो सुताइबाट थहा हुन्छ कि बिवाहित जोडीको बैवाहिक जिवन संकटमा पर्दैछ । या अर्को अध्यनलाई मान्ने हो भने घुरेर सुत्ने दाम्पत्यहरू एक अर्कालार्इ डिस्टर्व नहोस भन्नकालागिपनि यस्तो सुताइको प्रयोग गर्ने गरेका छन ।
१० गंगटो आकारको सुताई
दैनिक कामकाज पछि शरिरलाई थकान महसुस गर्दै सुतिने प्रकार हो गंगाटो आकारको सुताइ , आवस्यकता भन्दा बढी काम गरेपछि नव दम्पतीहरू यस्तो सुताइ रूचाउने गरेको अध्यनले देखाएको छ । यस्ता प्रकारको सुताइले दुवैको यौन सम्बन्धलाई कमजोर बनाइ दैनिक झगडा र फौजदारी हुन सक्ने तथा यहासम्म की दुवैबिच अलग्गिएर बस्नुपर्ने बातावरण शिर्जना हुने अध्यनले देखाएको छ ।